ခါရှိုဂျီ အသတ်ခံရမှု အမေရိကန် ဆီးနိတ်၏ ရပ်တည်ချက်အပေါ် ဆော်ဒီအာရေဗီးယား ကန့်ကွက် - Yangon Media Group
ကိုင်ရို၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၇
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဆီးနိတ်လွှတ်တော်က ခါရှိုဂျီအသတ်ခံရမှုအပေါ် ၎င်းး၏ရပ်တည်ချက်အား ဖော်ပြခဲ့ရာ ဆော်ဒီအာ ရေဗီးယားက အဆိုပါရပ်တည်ချက်ကို ကန့်ကွက်ကြောင်း ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက် အစောပိုင်းက ပြောကြားလိုက်သည်။ ဂျာမဲလ်ခါရှိုဂျီသတ်ဖြတ်မှု မှာ ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ကြောင်း၊ ဆော် ဒီအာရေဗီးယား၏ မူဝါဒနှင့်ဆန့် ကျင်ကြောင်း၊ ဆော်ဒီအာရေဗီးယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ကြေ ညာချက်တွင် ဖော်ပြလိုက်သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ရပ်တည်ချက်အပေါ် ဆန့်ကျင် ကြောင်း ဆော်ဒီအာရေဗီးယားက ပြောကြားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ အမေ ရိကန်၏ပြောကြားချက်မှာ အခြေ အမြစ်မရှိဘဲ စွပ်စွဲချက်သာဖြစ် ကြောင်း၊ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား ၏ ပြည်တွင်းရေးကို ယုတ္တိမရှိဝင် ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းသာဖြစ် ကြောင်း၊ ဤစွပ်စွဲမှုကြောင့် ဆော်ဒီအာရေဗီးယား၏ ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍကို ထိခိုက်စေကြောင်း၊ အဆိုပါ ကြေညာချက်၌ ဖော်ပြသည်ကို ဆော်ဒီသတင်းအေဂျင်စီက ရေးသားလိုက်သည်။ ဆော်ဒီနိုင်ငံသားဂျာမဲလ်ခါ ဂျိုဂျီအသတ်ခံရမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဆော်ဒီက ဤကိစ္စမှာ ရာဇဝတ်မှု ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆော်ဒီအာရေဗီးယား၏ ပေါ်လစီနှင့်ဆန့်ကျင်ကြောင်း အခိုင်အမာပြောကြားထားပြီးဖြစ် ကြောင်း၊ ဘုရင့်နိုင်ငံ၏ တရားရေး လမ်းစဉ်အပေါ် လမ်းလွဲအောင် လုပ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုကို ကန့်ကွက် ကြောင်း ကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြ ခဲ့သည်။
အမေရိကန်အထက်လွှတ် တော်က ထရန့်၏ဆော်ဒီအာ ရေဗီးယားပေါ်လစီနှင့်ပတ်သက်၍ အပြစ်တင်မည့်အစီရင်ခံစာနှစ် စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ယီမင်တွင် ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား၏ စစ်ဆင် ရေးကို အကူအညီပေးမှုရပ်ဆိုင်းရန်နှင့် ဆော်ဒီအာရေဗီးယား အိမ်ရှေ့မင်းသားအား ခါရှိုဂျီ အသတ်ခံရမှုအတွက် ပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့သည်။
အမေရိကန်၏ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများသည် နျူကလီးယားလက်နက် ဖျက်သိမ်းရေး လမ်းကြောင်းတွင် အတားအဆီး?
ကမ္ဘာ့နေထိုင်မှုစရိတ် အမြင့်မားဆုံး မြို့တော်များ စာရင်း ထုတ်ပြန်
ဝက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားခဲ့မှုကြောင့် ဆယ်စုနှစ်တစ်စု ဝန်းကျင် ဝက်အရှင်ဝယ်ယူမှု ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရာမှ ခ??
ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့အား တပ်မတော်နေ့ဟု သတ်မှတ်ထားခြင်းကို လက်မခံဟု ဦးဥာဏ်ဝင်း ဆို
ရှမ်းယူနိုက်တက် လူငယ်သွေးသစ် ရွေးချယ်ပွဲတွင် ကစားသမား ၄၅၉ ဦးထဲမှ အကောင်းဆုံး ၁၂ ဦးသာ အပြီ
ရန်ကုန်စည်ပင် နယ်နိမိတ်အတွင်း ဆိုင်ကယ်စီးနိုင်မည့် ဧရိယာကို ပြန်လည် သုံးသပ်နေ